मेरो स्मार्ट होम एक बर्ष भन्दा बढी पछि - स्तम्भ / गाईड - स्मार्टमे
द्वारा प्रकाशित	 पावलले
स्मार्ट होमको विचार सरल छ - "सबै चीज स्वत: हुनुपर्दछ"। व्यक्तिगत रूपमा, मैले यो सिद्धान्तमा थप गरेको छु - "बाह्य व्यक्तिहरू द्वारा म्यानुअल नियन्त्रणको सम्भावनाको साथ"। किन? जहाँसम्म म वा मेरा साथीहरू "घर जीवित छ" भन्ने कुराको लागि प्रयोग गरिएको छ, जो बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू (वा मेरा आमा बुबा, उदाहरणका लागि) "म्यानुअल" विभिन्न उपकरणहरू सञ्चालन गर्न रुचाउँदछन्। म मेरा पाहुनाहरुलाई सम्मान गर्दछु, त्यसैले मैले निर्णय गरे कि "मेरो गुँड" उनीहरुका लागि मिल्छ। थप रूपमा, सबै नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको सुरूमा जान्छन् र यी उपन्यासहरूसँग पूर्ण आरामदायक नहुन सक्छ (जस्तो मैले लेखें यहाँ)। यस लेखमा, म तपाईंलाई कसरी देखाउँछु कि मैले कसरी आफ्नो घर डिजाइन गरे। तपाईं यसलाई गाइड / स्तम्भको प्रकार, वा जिज्ञासाको रूपमा व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ।
मैले प्रस्ताव गरेको अर्डर काफी परम्परागत छ, तर वित्त को खातिर, मैले यस तरीकाले मेरा खरीदहरू मिलाएको छु।
पहिलो - सफाई
ठीक छ, मेरो पहिलो खरीदहरू बायोमी v2 प्रो क्लीनिंग रोबोट थियो (तपाईं समीक्षा पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ)। भ्याकुम क्लीनरले अहिलेसम्म उत्कृष्ट काम गर्दछ। मैले पहिले नै केहि परीक्षण गरिसकेको छु, तर तिनीहरूमध्ये कसैबाट पनि त्यस्तो उपकरणबाट मैले आशा गरेको चीजहरू थिएन। हो, यसका बेफाइदाहरू छन् - यो गुगल सहायकसँग जोड्दैन, कहिलेकाँही उसले नक्शा हरायो (यद्यपि पछिल्लो अपडेट पछि त्यस्तो केही भएन), त्यहाँ कुनै "नो-मोप जोन" प्रकार्य छैन। यद्यपि यसका फाइदाहरुले बेफाइदहरु लाई पन्छायो।
पहिलो मोपिंग। तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि एक बर्ष पहिले पोल्याण्डमा वैक्यूम क्लीनर थिएन कि यस प्रकारले मोडिनेछ, अर्थात यो वाई मोडमा काम गर्दछ।भियोमीले पत्र Y को हिसाबले भुइँ खाली गर्दछ। उच्च सक्शन पावर (अधिकतम २१०० प) यसमा पनि योगदान पुर्‍याएँ, कि मैले भर्खरै यो मोडल किनें। र एक दोस्रो मुद्दा - उपस्थिति। मलाई व्यक्तिगत रूपमा यो धेरै मन पर्छ। अहिलेसम्म मैले कुनै रोबोट भ्याकुम क्लीनर देखेको छैन। आज, म शाओमी भ्याकुम एमओप प्रो बाओमी उत्पादनहरूमा थप्न चाहान्छु। यो उही प्रकार्य छ र अतिरिक्त गुगल संचारकर्ता संग संचार गर्दछ।
हे गूगल! तपाईं पोलिश बोल्नुहुन्न, तर तपाईं अझै पनि काममा आउनुहुन्छ।
ठीक छ, आवाज घरबिना स्मार्ट घर के हुनेछ? म सँधै फलामको मानिस हुँ। जब मैले पहिलो पटक टोनी स्टार्कलाई जार्विससँग काम गरिरहेको देखेँ, मैले सोचें - म पनि यो चाहान्छु! मैले गुगल होम मिनी खरीद गरें। तपाईं समीक्षा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। मैले तपाईंलाई भन्नु पर्छ कि यो समीक्षा अझै मान्य छ। यो सत्य हो कि गुगल नेस्ट मिनी (र अन्य नेस्टहरू) बाहिर आए, तर भिन्नताहरू थोरै छन्। पछिल्लाको पक्षमा। म केवल भन्न सक्छु कि म यो बिना कामको कल्पना गर्न सक्दिन। आज, यो सानो लाउडस्पीकरले मेरो घरको हरेक उपकरण नियन्त्रण गर्दछ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, मेरो भाई (जससँग सफाई रोबोट र गुगल स्पिकर छ) लाई यो एकदम उपयोगी चीज भयो। तपाईंलाई अभिवादन, भाई - सम्झना स्मार्ट जुनस सबैलाई हुन्छ। एउटा नोट याद गर्नुहोस् कि Google घर अझै पनि पोलिशमा काम गर्दैन।
टर्नटेबल स्मार्ट छैन? यो स्मार्ट घर प्रोजेक्टको लागि समस्या पनि होइन।
खैर, यो यस्तो हुन्छ कि त्यहाँ उपकरणहरू छन् जुन प्रकृतिबाट स्मार्ट छैन। के हामीले हाम्रो स्मार्ट घर डिजाईन गरिरह्यौं भन्ने तथ्यका कारण के हामीले तिनीहरूलाई फालिदिनु पर्छ? होइन, उपयुक्त प्लगहरू, स्ट्रिपहरू वा "क्रोमकास्टहरू" पर्याप्त छन्। यो क्रोमकास्टसँग सुरु गरौं किनकि यो अर्को खरीद थियो। मसँग दुईवटा टिभी सेटहरू छन् (कलाकारहरूले पनि केही कमाउन सक्छन् ...), एकसँग एन्ड्रोइड टिभी छ, अन्यले गर्दैन। सुरुमा मैले क्रोमकास्टलाई यसमा एन्ड्रोइड टिभी बिना जडान गरे। यसले त्यहाँ ठूलो काम गर्‍यो, तर ... एन्ड्रोइड टिभीले गुगल होमको राम्रोसँग राम्रो काम गरेन (यो यसलाई बन्द गर्ने र टाढाको रूपमा थियो) मैले क्रोमकास्टलाई अर्कोमा सारियो र ... सबै कुरा राम्ररी काम गर्दछ। दोस्रो टिभी भर्खरको "प्लग" को लागी "गुगल" बाट सस्तो हुनको लागि पर्खिरहेको छ (बाहेक - मैले यो १ टिभी प्रयोग गर्दिन)। ठीक छ, तर टर्नटेबलको बारेमा के? यहाँ मैले स्मार्ट स्ट्रिप किनेका थिए। यो उपकरणले मलाई व्यक्तिगत रुपमा सम्पर्कहरू प्रबन्ध गर्न अनुमति दिन्छ (वा सबै एकै समयमा)। यो उत्तम समाधान होईन, किनकि टर्नटेबलसँग छुट्टै "अन / अफ" बटन छ, त्यसैले कहिलेकाँही तपाइँले यसलाई क्लिक गर्नुपर्दछ (यदि कसैलाई यो समस्याबाट कसरी छुटकारा पाउने भनेर थाहा छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्)। मसँग पनि एक कन्सोल जडिएको छ (म व्यावहारिक रूपमा यसलाई प्रयोग गर्दिन) र मन्त्रिपरिषदमा एक नेतृत्वको प्रकाश, र हो ... र USB इनपुटका लागि सियोमीबाट एक रेपेटर।
मार्गमा एउटा निगरानी क्यामेरा
यहाँ, मैले परीक्षणको लागि प्राप्त गर्दा, म पनि Sonoff क्यामेरा एक सुन्दर नाम GK-200MP2-B का साथ उल्लेख गर्नेछु (समीक्षा यहाँ)। क्यामेरा राम्रो छ, तर सबै भन्दा राम्रो होइन। यसले फुल एचडीमा रेकर्ड गर्दछ, रात्रि दृष्टि छ ... तर यसको सबैभन्दा ठूलो नुकसान मोशन डिटेक्शन सिस्टम हो। क्यामेराले "रोक्न" को रूपमा यसको रोटेसन पत्ता लगाउँदछ। यसको क्षमताहरूको लागि मूल्य पनि कम हुन सक्दछ (हाल यसको लागत PLN १ 170० छ)। जे होस्, क्यामेराको रूपमा, उदाहरणका लागि बेसमेंटका लागि, यसले कार्य गर्दछ।
त्यहाँ उज्यालो हुन दिनुहोस् - त्यो एक "स्मार्ट घर" प्रकाशित गरिएको छ!
स्मार्ट घरको साथ मेरो साहसको अर्को चरण हल्का थियो। र यहाँ मैले गम्भीर योजना सुरु गरें। म राम्रो जग खोज्दै थिए। भाग्यले मलाई सोनोफबाट स्विच प्राप्त गर्न चाहेको थियो जुन मैले पछि फेला पारेन। मलाई लाग्यो कि म यस ठाउँमा जान्छु, तर मसँग एक तथाकथित छैन तटस्थ केबल त्यो बेलामा मैले Q-touch (समीक्षा) पाए यहाँ)। एक बर्ष पछि, मैले एउटा त्रुटि देखें जुन मलाई कसरी हटाउने थाहा छैन। अर्थात्, जब फ्रिजले Q-टच स्विच "फ्रिज" गर्न थाल्छ, तिनीहरू अनियमित रूपमा कोठा मध्ये एकको प्रकाश "क्लिक" गर्दछ। यी सबै बत्तीहरू इवेलिंक अनुप्रयोगमा काम गर्दछन् - त्यसैले मेरो थप धारणा छ कि लाइटहरूलाई समर्थन गर्ने थप उपकरणहरूले यस प्लेटफर्ममा काम गर्दछन्। र त्यसकारण यो सेट मोशन सेन्सरहरू, ढोका / विन्डो ओपनिंग सेन्सर, दुई भौतिक बटनहरू, सोनफ मिनी, तापमान सेन्सरहरू द्वारा सामेल गरिएको थियो - सबै Sonoff Zigbee ब्रिजसँग जोडिएको छ (समीक्षा यहाँ)। अन्तमा, म तपाईंलाई मेरो घरमा सेट गरेको दृश्यहरू प्रस्तुत गर्दछु।
र यहाँ पनि - यदि यो तथ्यको लागि होईन कि म स्मार्टमेको संपादक हुँ भने, म यो क्यामेराको बारेमा सिक्दिन। युफी इनडोर क्याम (समीक्षा जुन तपाईले फेला पार्न सक्नुहुन्छ यहाँ)। यो एक धेरै उच्च स्तरको क्यामेरा हो (र यसको लागी Sonoff रिकॉर्डर भन्दा धेरै खर्च हुँदैन)। मैले युफी इनडोर क्यामलाई यस्तो ठाउँमा झुण्ड्याएको छु कि कुनै सम्भावित चोरले त्यसमा कुनै पनि हालतमा पक्राउ पर्दछ। म निश्चित रूपमा कसैलाई सिफारिस गर्न सक्छु।
एक वास्तविक स्मार्ट होम - दृश्यहरू जसले जीवनलाई सजिलो बनाउँदछ।
ठीक छ, एक स्मार्ट घर (वा छोटो: स्मार्ट घर) एक हो जुन प्रयोगकर्तालाई अनुकूलन गर्दछ। त्यसो भए मेरो अटोमेसनहरू कस्तो देखिन्छन्?
सुरुमा, म गुगल गृहबाट सुरू गर्नेछु। यहाँ मसँग आधारभूत दिनचर्याहरू छन्:
शुभ प्रभात - दिनको मौसम दिन्छ, सडक सर्तहरू, स्पिकरहरू (जुन स्मार्ट छैन) टर्न हुन्छ, अपोइन्टमेन्टहरू, रिमाइन्डरहरू दिन्छ, मिडिया भोल्युम सेट गर्दछ र संगीत खोल्छ।
सुत्न समय - भोलिको लागि मौसम पूर्वानुमान दिन्छ, भोलिको पहिलो बिन्दु दिन्छ, एक अलार्म सेट गर्दछ, सबै उपकरणहरू बन्द गर्दछ।
म घरमा छु - स्पिकरहरू खोल्दछ र PS4 मा पावर, मल्टिमेडिया भोल्युम सेट गर्दछ, रेडियो खोल्छ।
म घर छोडछु - सबै उपकरणहरू बन्द गर्दछ
यहाँ म तपाईंलाई सबैभन्दा रोचक दृश्य दिनेछु। तिनीहरू सबै दिनको pm बेलुका वरिपरि चल्नका लागि तयार छन्।
घरको मुख्य प्रवेशद्वारमा हलको प्रकाश बन्छ -> म कोठामा प्रवेश गर्दछु हलको प्रकाश बन्द हुन्छ, खडा बत्ती बाल्छ।
भान्साकोठामा प्रवेशद्वारले एलईडी बत्तीलाई सक्रिय पार्छ (मैले अर्को साइडको लागि सोनफ मिनी किन्नु पर्छ) -> सेन्सरले चाल पत्ता लगाउँदैन, प्रकाश बन्द हुन्छ।
बाथरूममा प्रवेश गर्दा बत्ती निस्किन्छ
ठीक छ, यस्तो स्मार्ट घरको लागि हामीलाई ठूलो स्विचबोर्ड चाहिन्छ (केही पाठकहरूले सोच्दछन्)। आवश्यक छैन। यो यति मात्र हुन्छ कि मसँग मेरो घरमा एक क्याबिनेट छ यसमा ग्यास मिटर छ। त्यस्ता उपकरणहरूको लागि यो उत्कृष्ट ठाउँ हो! विशेष गरी जब हामीसँग त्यस्ता चीजहरूको लागि खाली "भित्ता" छ।
भविष्यका लागि योजनाहरू
खैर अब के? जस्तो म तापक्रम सेन्सर छ, स्मार्ट थर्मोस्टेटमा लगानी गर्न लायक हुन्छ जुन उपयुक्त तालिका अनुसार सेट हुन्छ। जे होस्, म अझै कहीँ मेरो टाउकोमा किचनको लागि "सानो" टिभीको रूपमा Google हब किन्नको लागि छु। थप रूपमा, Eufa बाट सुरक्षा प्रणाली र ढोका क्यामेरा र टेडीबाट स्मार्ट लक सहितको घण्टी।
Allegro मा नयाँ पदोन्नति। The “स्मार्ट! सुरु गर्न "
Allegro एक नयाँ पदोन्नति "स्मार्ट! शुरू गर्न" शुरू गर्ने निर्णय गरेको छ। अब देखि, सबै प्रयोगकर्ताहरू जोसँग सक्रिय एलेग्रो स्मार्ट सदस्यता छैन, पाँच नि: शुल्क वितरणको प्याकेजको मजा लिन सक्छन्। Allegro एक नयाँ पदोन्नति स्मार्ट स्मार्ट शुरू! सुरु गर्न ...
एमआई होम र सिरी सर्टकटको स्वचालन
AUTOMATIONS, Xiaomi, xiaomi घर
तपाईको स्मार्ट घरको साथ जति धेरै प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईले अधिक गर्न चाहानुहुन्छ! यस ट्यूटोरियलमा, चरण-देखि-चरण, म वर्णन गर्दछु कसरी सिरी सर्टकटमा अटोमेसन थप्न। यसका लागि धन्यबाद, तपाईंको अटोमेसनहरू उल्लेखनीय हुनेछ ...